Ma heli karaa qabow wax ugu dambeeyey: iPhone 6? Ha yaanay tani kaa dhibaya. Ma ahan in heshiis weyn. Waxaad ku raaxaysan kartaa dhammaan qaababka cusub ee macruufka 8 Bixiya iPhone 6 ku saabsan qalabka macruufka aad. Just heli macruufka 8 bixi oo lagu rakibay on your iPhone, iPad ama iPod taabto. Maqaalkani waxa uu diiradda saarayaa warramayay sidii ay dayactir in macruufka 8 aad qalab macruufka aad. Raac tilmaan u fudud in ay bartaan sidii ay u cusboonaysiiyaan in macruufka 8.
Qaybta 1. Bareebka Work for Casriyaynta in macruufka 8
Qaybta 2. Sidee si ay kor si macruufka 8 via Lugood (talinayo)
Qaybta 3. Sida loo casriyeeyo si ay u macruufka 8 badan hawada (qalabka macruufka si toos ah)
Qalab waafaqsan 1. Check. Ha ku farxaa kaliya inaan weli! Waxa ugu horreeya ee aad u baahan tahay inaad samayso waa si loo hubiyo in qalabka macruufka waa ay awoodaan in ay ku ordi macruufka 8 ama aan. Apple ayaa ku qoran soo qalabka macruufka in si buuxda la jaan qaada macruufka 8. Haddii qalab aad liiska ku jiro, markaas waa inaad u cusboonaynta kartaa in macruufka 8. Ok, haddii aad iPhone, iPad ama iPod taabto waa liiska (ka fiiri shaashada ah hoose), markaa waa in aad shaqada udiyaar soo socda sameyn.
2. Hubi in aad qalab macruufka ah ayaa macruufka 8 update kaydinta ku filan. Waxaa jira 2 habab si loo soo dajiyo macruufka 8 aad iPhone, iPad iyo iPod Touch, iyada oo Lugood iyo si toos ah ku saabsan qalabka macruufka. Waxaad dooran kartaa si walbaba aad jeceshahay. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad isku daydo in ay casriyayso si macruufka 8 on qalab aad, ka dhigo mid loo hubiyo in ay jirto 6GB on qalab aad kaydinta, maxaa yeelay, Apple waxay u baahan tahay in ay. Ayaa looga baahan yahay kaydinta saxda ah waa kala duwan ee lagu daydo kala duwan ee iPhone, iPad iyo iPod taabto. Haddii aadan haysan in kaydinta badan ku saabsan qalabka macruufka ama aadan qorsheyneysa in ay tirtirto waxyaabaha ku saabsan qalab aad u lacag la'aan ah ilaa meel ku filan , doorasho kaliya ee samayn macruufka 8 update waa in ay casriyayso via Lugood .
Ka sokow kor ku sheegnay in shaqada udiyaar, si ay u hubiyaan ammaanka xogta aad iyo kor loogu qaado Raaxo ee macruufka 8, inaad si fiican u qaadan lahaa saafiga ah ee article 5 wax waajib ah inaad samaysid ka hor lagu casriyeeyo si macruufka 8 .
Waa maxay sababta lagu casriyeeyo si macruufka 8 dhex Lugood lagu talinayaa?
Kaydinta ka yar waxaa looga baahan yahay qalab macruufka ah. Casriyaynta in macruufka 8 badan hawada aad u baahan tahay ugu yaraan 4.6GB kaydinta laga heli karaa qalab macruufka ah, taas oo macnaheedu yahay in aad leedahay si ay u diyaariyaan 6GB for update guul. halka haddii aad update macruufka ah iyada oo Lugood, kaliya waxa aad u baahan tahay 2GB ku saabsan qalabka macruufka kaydinta.
Wakhti ka yar ayaa loo baahan yahay. Casriyaynta in macruufka 8 dhex Lugood waa ka dhaqso badan u sameeyaan si toos ah qalabka macruufka ah . Qofka ugu discussions.apple.com ayaa ka cawday in isaga loo baahan yahay in ka badan 30 saacadood si ay u soo bixi xirmo rakibo uu iPhone iyadoo kaliya ku kici isaga ka yar nus saac ah qabanayaan update macruufka 8 uu computer.
Shabakadda waa ka xasilloon. Shabakadda u computer ah waa deganaanshaha badan WiFi ku qalab macruufka ah. Inta lagu guda jiro habka warsiinta ah, dadka qaar ayaa sheegay in jarida WiFi had iyo jeer ka dhashay fashilka update ah.
Qalab macruufka jailbroken waa in ay casriyayso si macruufka 8 via Lugood. Haddii kale, update ka darnaan doono iyo dadka isticmaala heli doonaan qalab macruufka ah waa la shaashadda madow dhintay ama la Apple logo xayiran qalabka.
qalabka macruufka socda ee macruufka 6 ama qoraalkii hore waa in ay casriyayso si macruufka 8 via Lugood. Ama update wey aad.
Waxaa jira 3 fursadaha in guud ahaan si ay kor si macruufka 8 via Lugood. Hab kasta wuxuu leeyahay faa'iidooyinka. Dooro sida saxda ah in xaq ay aad u!
Xulashada 1: habka ugu fudud in la sameeyo macruufka 8 update via Lugood,
Tallaabada 1. Cusboonaysii Lugood si aad u version ugu dambeeyay. Connect aad iPhone, iPad ama iPod Taabsiiyo your computer iyo abuurtaan Lugood. Fadlan hubi in aad computer ku xiran yahay shabakad deggan sameeyo.
Tallaabada 2. Lugood, guji si aad qalab macruufka ah. Daaqadda pop ah, waxaad arki kartaa macluumaadka aad qalab macruufka ah. Oo waxaa jira line kuu sheegaysa in version macruufka 8.0.0 ee la heli karo qalab macruufka. Riix 'Update', ka dibna aad u cusboonaynta doonaa qalab aad u macruufka 8.
Faa'iidada: Waa mid aad u fudud in ay ku shaqeeyaan. Looma baahna in la soo bixi firmware kasta ama wax kasta oo shaqo dheeri ah samayn.
Qasaaraha: Waa in aad sugto muddo dheer Lugood soo bixi xirmo rakibo. Inta lagu guda jiro habka loo soo dajiyo, waxaa laga yaabaa inaad lumiso xogta aad
Xulashada 2: hoos u hay Key Shift oo guji 'Update' on Lugood
Tallaabada 1. Download firmware aad qalab macruufka ah sida ay model qalab macruufka ah. Badbaadin on your computer.
Tallaabada 2. Download iyo rakibi Lugood dambeeyay on your computer. Connect aad iPhone, iPad ama iPod Taabsiiyo your computer iyo ordi Lugood.
Tallaabada 3. Lugood, guji si aad qalab macruufka ah. Ku hay hoos muftaaxa Shift (key Xulashada on Mac) on keyboard iyo riix badhanka 'Update' on your computer. Daaqadda pop-up ka, ka heli firmare ee aad ku badbaadi on your computer oo dooran. Riix 'Open' oo ha Lugood kale yeelaan macruufka 8 update aad u.
Faa'iidada: Waa quruxsan degdeg ah si ay kor qalab aad si macruufka 8 sidan.
Qasaaraha: Waxaad kala soo bixi firmware saxda ah marka hore. Oo haddii shabakada oo aan xasillooneyn ku filan, inta ay socoto update ka, waxaa laga yaabaa inaad lumiso xogta ku saabsan qalabka macruufka.
Xulashada 3: Iska aamus hoos Key Shift markaas ku dhufo "Soo Celinta 'on Lugood
Tallaabada 1. Download macruufka 8 firmware aad macruufka qalabka sida ay model qalab macruufka ah. Badbaadin on your computer.
Tallaabada 2. Waxaad hubisaa in aad Lugood waa nooca ugu dambeeya. Haddii aan, waxay u cusbooneysiin. Connect aad iPhone, iPad ama iPod Taabsiiyo your computer iyo abuurtaan Lugood. On Lugood, guji si aad qalab macruufka ah. Daaqadda pop ah, waxaad arki kartaa macluumaadka aad qalab macruufka ah. Marka ay kaabta, dooran 'Computer Tani' markaas ku dhufo "Back Up Hadda '. Marka aan sidaa yeelno, aad xogta macruufka aad si guul leh gurmad si aad u computer. Waad og tahay, sidan hore masixi doono dhammaan macluumaadka ku saabsan qalab aad ka dibna loo soo celiyo data in qalab aad ka file gurmad idin abuuray ka dib markii aan macruufka 8 update si guul ah.
Tallaabada 3. Qabo hoos muftaaxa Shift (key Xulashada on Mac) on your keyboard iyo ku dhufo "Soo Celinta iPhone (iPad ama iPod) '' uu furmo isla Lugood. In uu furmo suuqa cusub pop-up, dooran firmware ee aad soo bixi si aad u computer in talaabada 1 oo la furo. Ha Lugood samayn ku update macruufka 8 aad u.
Tallaabada 4. Ka dib markii lagu casriyeeyo si macruufka 8 si guul ah, waxaad ka heli doontaa in dhammaan xogta ku saabsan qalab aad ka dhammaatay. Si aad u hesho xogta ka dib, guji "Soo Celinta kaabta '. In ka pop-up cusub, dooran gurmad ah ayaan idin ka abuuray talaabo 2 iyo soo celinta xogta si aad qalab macruufka ah. Taasi waa!
Faa'iidada: Waa habka ugu nabad badan in la gaarsiiyo in macruufka 8. Isticmaalka sidan kuma dhaco xogta aad laga badiyay.
Qasaaraha: Waxaad u leeyihiin in ay maraan habka dheer oo upgradint in macruufka 8: download firmware> data gurmad> update in macruufka 8> celin xogta.
Si loo xaqiijiyo in guusha lagu casriyeeyo si macruufka 8 aad qalab macruufka ah, fadlan ku dadaal in aad la kulmi karto shuruudaha sameeyo:
Hayso 6GB kaydinta laga heli karaa qalab macruufka. Sameynta ugu update macruufka 8 si toos ah qalab aad u baahan tahay meel ballaaran. Haddii aadan haysan kaydinta aad u badan, sidoo kale waxaad isku daydaa inaad u cusboonaynta in macruufka 8 via Lugood ama isku day hababka oo bilaash ah ilaa meel .
Waxay leeyihiin shabakad deggan. Haddii aad WiFi oo aan xasillooneyn, ka dibna waxa ay u badan tahay in aad ku guul darreysato doonaa in ay sameeyaan macruufka ah 8 update;
Hayso baateri buuxa ama lagu xiro qalabka si ay il awoodeed. Waxay qaadataa waqti dheer in la sameeyo update qalabka macruufka ah. Haddii aadan haysan awood ku filan, ka dibna aad ku guul dareysato doonaa in ay sameeyaan update ah;
Hubi in qalabka macruufka aan jailbroken. Ama iib- hubiyo in, aan aad u cusboonaynta kartaa qalab aad u macruufka 8;
Waa sidan sidii ay dayactir in macruufka 8 qalabka macruufka ah si toos ah: Settings Tubada app ku saabsan qalabka macruufka> General> Software Update. Click Download iyo rakib button ee macruufka 8. Ka dib markaas, waxaad u baahan tahay inay hesho in ay ku heshiiyaan in ay shuruudaha iyo xaaladaha Apple ee. Marka macruufka 8 rakibo xirmo la soo bixi si guul ah, waxaad ka arki kartaa batoonka 'Ku rakib Hadda'. Waxaa Tubada oo sug qalab aad ku guuleysatey. Later, ka jaftaa dhex screen Mudanayaasha on qalab aad ka. Taasi waa!
5 Talo in Hagaaji in macruufka 8
Kabsado Messages iPhone ka dib markii macruufka 8 Hagaaji
Si fudud dayactir Apple White Screen of Death
IPhone wareejiyo iPhone 6 1 Click
> Resource > macruufka > Sida loo rakib macruufka 8 on iPhone / iPad / iPod taabashada